57% Dadku Kuma talinayaan adiga maxaa yeelay…
Axad, Agoosto 24, 2014 Sabtida, Maarso 5, 2016 Douglas Karr
57% dadku kuma talinayaan shirkaddaada maxaa yeelay waxaad leedahay degel websaydh moobiilkiisu fiicanyahay. Taasi waa ku xanuunaysaa… waana ognahay Martech Zone waa mid ka mid ah! In kasta oo aan haysanno codsi moobiil oo cajiib ah, haddana waxaan ognahay mawduuca moobiilka Jetpack ee moobiilku inuu xannuun badan yahay in boggayaga laga daawado. Maaddaama aan sii wadno la shaqeynta macaamiisheenna oo aan dib u eegis ku sameyno falanqeyntooda, waxaa noo caddaatay in macaamiisheenna aan ku habbooneyn
Arbaco, Juun 23, 2014 Douglas Karr
Maaddaama soo-bandhigyada xallinta-sarreeya ay noqdaan meel caadi ah qalab kasta, waxaa muhiim ah in suuqleydu ay ka faa'iideystaan ​​saameynta uu leeyahay xallinta sare. Hufnaanta sawirada loo adeegsaday emayllada, tusaale ahaan, waxay saameyn ba'an ku yeelan kartaa akhristaha emaylka. Abuuritaanka sawiradaada si sax ah ka dibna cabir / qiyaasaya - dhammaantood adoo hagaajinaya cabirka feylasha ee sawirada - waa isku dheelitirnaan jilicsan si loo hubiyo inaad ku habboon tahay jawaabta ugu fiican
FirehoseChat: Goobta Wadajirka ah ee lagu dhex daray Mac, iPhone iyo iPad
Talaado, Juun 24, 2014 Douglas Karr
FirehostChat waa barnaamij si buuxda u dhashay oo leh ogeysiis riix ah oo u fudud sida qoraalka. Xitaa waxaad ka heli kartaa ogeysiisyo sheekeysi ah shaashaddaada qufulka ee 'iPhone' oo ay ku jirto codsigooda moobiilka. Isticmaalayaasha waxaa lagu aqoonsan karaa goobta jir ahaaneed waxaadna aqoonsan kartaa bogga ay kujiraan iyo sidoo kale nidaamka nidaamkooda. Nooca la bixiyay wuxuu la yimaadaa CSS si buuxda loo habeyn karo, taageero badan oo isticmaaleyaal ah iyo taariikhdaada sheekaysiga. Waxaad u badan tahay inaad hesho gaadiid aad uga badan intaad ogtahay,